[အခန်းဆက်] ဂျပန်ရိုးရာမုန့်ဆိုင် “Seiza” ရဲ့နေ့စဉ် ၅၀၀၀ကျပ်တန် နေ့လည်စာ ! | yathar Magazine
စားသောကျဆိုငျ • လမျးကွောငျးသဈ • အငျတာဗြူး
[အခန်းဆက်] ဂျပန်ရိုးရာမုန့်ဆိုင် “Seiza” ရဲ့နေ့စဉ် ၅၀၀၀ကျပ်တန် နေ့လည်စာ !
လတ်တလောမျက်မှန်ဒီဇိုင်းလေးပြောင်းလိုက်တဲ့ မျက်မှန်ဆူရှီ !
ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဂျပန်ရိုးရာမုန့်ဆိုင်
“Seiza” (Sweet Seiza) ဆိုင်လေးပါ !
ဂျပန်ရိုးရာမုန့်ဆိုသလိုပဲ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ရိုးရာပွဲတွေမှာ အဓိကမပါပဖြစ်မုန့်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ (၄) ရာသီရှိတယ်ဗျ။ ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေကိုရာသီကိုအခြေခံပြီး အရသာနဲ့အမြင်ကိုပြောင်း လဲသတ်မှတ်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်အသေးစိတ်ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် အရမ်းကိုအရသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါကြောင့် Seiza သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်စစ်စစ်တွေကိုဝယ်ယူစားသုံးနိုင်တဲ့ဆိုင် ဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်မြို့နေ ဂျပန်လူမျိုးများအတွက်တော့ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလှ တယ်ဗျ။
မျက်မှန်ဆူရှီ ကျွန်တော်ကတော့ ပုံမှန်အားတဲ့နေ့တွေမှာလည်းသွားရောက်လေ့ရှိတယ်ဗျ။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ အရမ်းအရသာရှိတဲ့ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေအပြင် အခုတလောဘာတွေရနိုင် သေးလဲဆိုရင်
ဂျပန်စတိုင်နေ့လည်စာကို စတင်ရရှိနေပြီ !
နေ့လည်စာက နေ့စဉ်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ပေးမယ့်အပြင် ၅၀၀၀ ကျပ်ဆိုတော့ ! !
ဟူးဟူးဟူး ! ဂျပန်စတိုင်ကို ၅၀၀၀ ကျပ် အရမ်းတန်နေပြီနော် ! ! !
ကဲ မြန်မြန်လေး အခြေအနေကိုမေးကြည့်ရအောင်လား !
ဘာ ဘာဘယ်လို . . .
ဒီနေရာက ဂျပန်အဆင့်မြင့်စားသောက်လား ? လို့အမေးခံရလောက်တဲ့ ဆိုင်ဝင်ကေ်!
ဈေးနှုန်းတွေက ခုရှိ ၂ခုကို ၁၅၀၀ကျပ် ဈေးသက်သာတယ်ဗျ။
ဟယ် ဂျပန်စတိုင် tatami !
ဂျပန်လူမျိုးဆိုတော့ ဒီလိုအခန်းမျိုးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခါးလေးကိုဆန့်ထားမိ တယ်။
ဆိုင်အတွင်းအပြင်အဆင် ဘယ်နေရာမှလစ်လပ်မှုမရှိအောင် ပြီးပြည့်စုံမှု။
ဟာ~ဟာ တကယ်ကိုပြည့်စုံတဲ့ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးရှိတဲ့အပြင် တကယ်ပဲ ၅၀၀၀ကျပ်တန် နေ့လည်စာကိုစားခွင့်ရနိုင်မလားဗျာ?
ဒီလိုမျိုး မျက်မှန်ဆူရှီ တစ်ယောက်စိတ်မအေးနိုင်
ဒီနေ့ရဲ့ တည်ခင်းပေးတဲ့ဟင်းပွဲလေးတွေကို ကြည့်ပါအုံးဗျ !
Udon ! gyudon ! shake no ochatsuke ! (ဒီ၃မျိုးအထိ ၅၀၀၀ကျပ်တန် နေ့လည်စာ) ပြီးတော့ dango ! strawberry juice !
ပမာဏကတော့ ပြောစရာမရှိ !
၀က်သား udon ကစမယ် !
တကယ်တော့ မျက်မှန်ဆူရှီရဲ့အမြင်မှာ udon လို့မထင်ဘူးဗျ!
ဂျပန်ခေါက်ဆွဲလို့ပြောလိုက်ရင် Reman လည်းမဟုတ် Soba လည်းမဟုတ် udon လို့ထင်နေတာ မျက်မှန်ဆူရှီ ပါ !
စားကြည့်ရင် ဒီလို udonခေါက်ဆွဲက မျက်မှန်ဆူရှီ အကြိုက်တွေ့ပါ့မလား ! ?
ခေါက်ဆွဲက အိစိအိစိ ၀က်သားက နူးနူးအိအိ ဆိုတော့ အရမ်းအရမ်းကိုအရသာရှိဗျာ!
အခုက အရသာကိုစမ်းသပ်ပြုလုပ်နေဆဲအဆင့်မှာပဲရှိသေးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပိုပြီးအရသာ ကောင်းမွန်လာမှာဗျ။ (အခုတောင်အရသာကပြည့်စုံနေတာ ဒီထက်ပိုကောင်းလာမှာဆိုတော့ ! )
နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Gyudon !
တကယ်တော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟမ်ဘာဂါလိုမျိုး အစားအစာတစ်ခုဖြစ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာ ဆိုင်ခွဲတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Gyudon ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသေးဘူးဗျ !
အဲ့လိုမျိုး Gyudon ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကိုလည်းစားကြည့်စေချင်တဲ့ဟင်းတစ်ပွဲ။
ထို့အပြင် miso ဟင်းချို၊ ကင်ချီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ချိစ် တွေလည်းပါတာကိုမှ ၅၀၀၀ ကျပ်ဆိုတော့မတန်ဘူးလားဗျာ !
အဲ့လိုမျိုး မျက်မှန်ဆူရှီု ရဲ့ နဖူးမှာတော့
[ အသား ]
ဒါဆို နေ့လည်စာရဲ့နောက်ဆုံး မီနူး
အဲ့ဒါကတော့ Ochatsuke ပါ။
ဟိုးးး ! ! အရသာရှိတယ်ဗျာ !
ကျွန်တော့ဆိုရင်တော့ osake ကိုသောက်ပြီးနောက်မှာဒီဟင်းပွဲကိုစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေမှာတကယ်ဗျာ။
ဒီလိုရိုးရာအစဉ်အလာပုံစံ “ဂျပန်စတိုင်”ကိုခံစားမိစေတဲ့ဆိုင် Seiza လေးမှာ ၅၀၀၀ ကျပ်တန် နေ့လည်စာကိုစားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရမ်းကိုတန်မနေဘူးလားဗျာ !
ဒါတွေပဲရှိတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ !
ထမင်းပွဲပြီးရင်အချိုပွဲ။ အသေအချာပဲဂျပန်ရိုးရာမုန့်ကိုစားရအောင်လား !
နောက်ဆုံးပိတ် Dango စားမယ် !
အရသာ ဂွတ် ! !
ဆိုင်ရှင် Mr. Nakahara နှင့်လည်းနှုတ်ဆက်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့တယ်။
Mr. Nakahara က ဂျပန်ရိုးရာမုန့်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာက “anko”လို့ခေါ်တဲ့ပဲအနှစ်၊ စစချင်းတုန်းက ကိုယ်တိုင် ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ပုံလုပ်နည်းသင်ပေးခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများကအင်တာနက်ကနေလေ့လာသင်ယူပြီး ကျွန်တော့ထပ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်လာခဲ့တာကို တွေ့ရတော့ အရမ်းကိုအံ့သြသွားခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဗျ !
အခြားသောအစားအစာများကိုလည်းနမူနာလုပ်ပြီးဆိုင်မှာတင်ရောင်းကြည့်မလား? ဆိုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြုလုပ်ယူလာတတ်ကြောင်း၊ ဒီလိုမျိုး မြန်မာလူမျိုးဝန်ထမ်းများရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကတကယ်ကိုချီးမွမ်းစရာကောင်းပြီးကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ် !
ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ပြုလုပ်သောဂျပန်ရိုးရာမုန့်။ ဂျပန်ရိုးရာမုန့်မှာမရှိတဲ့အမျိုးအစားများကိုမြန်မာနိုင်ငံမှစတင်ဖန်တီးပြီး ကမ္ဘာအနှံ့နာမည်ကြီးလာမှာအနှေးနဲ့အမြန်ပါပဲ !
နောက်ဆုံးမှာလက်ဆောင်လေးကိုကိုင်ပြီး အားလုံးနှင့်အတူတူ ချလပ် !
ဆူရှီ၊ ခေါက်ဆွဲ အားလုံးသိတဲ့ဂျပန်အစားအစာများကို အားလုံးအတွက်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
[အခန်းဆက်] ဒီတစ်ခေါက် kitty ရဲ့ Date က @ Yam Thai မှာ
February လ အစားအသောက် ကောက်ကြောင်း